Hadda waad balansan kartaa baarinta corona - xitaa haddii aadan lahayn astaamaha - Mino Danmark
19/05/2020 / COVID-19 oo loo yaqaano corona virus /
Looma baahna hadda in laguu helo gudbinta dhakhtarkaaga si aad u hesho waqti loogu talagalay baaritaanka cudurka corona. Laga bilaabo toddobaadkan dhammaan muwaadiniinta Denmark, waa inay awoodi karaan inay ballan ka qabsadaan websaydhka www.coronaprover.dk. Waxa looo bahanyahay isticmaalka ”Nem-ID”
Arintaan waxa lagu sheegay war-saxaafadeed, in ay Wasaaradda Caafimaadka iyo Waayeelku soo bandhigtey.
Waqti ayaad u qabsan kartaa waqtiga aad baaritaanka rabtid, ama yeelo astaamaha cudurka ama ha yeelanin. Mar alla markii waqtiga helo, baaritaanka waxa lagu qaadayaa mid ka mid ah teendhooyinka cad cad ee loogu talagaley dalka oo dhan.
Si kastaba ha noqotee, Wasaaradaa Caafimaadka waxay xasuusteen in baaritaanka corona uusan cadeyneynin in tilmaamaha masaafada iyo nadaafadda ay tahay in weli si ballaaran looga fiirsado cudurka. Tijaabadu 100% maaha oo laguma kalsoonaan karo, waxana jiri kara xaalado uusan caabuqu baaritaankiisu xitaa cadeyneyni karin in qofku qaadey cudurka.
Ka eeg wax dheeraad ah https://www.dr.dk/nyheter/indland/nu-kan-alle-danskere-blive-corona
Du er her: Mino Danmark / Hadda waad balansan kartaa baarinta corona – xitaa haddii aadan lahayn astaamaha